RN 32 Ahiana ho tapaka ny lalana
Tsy vao izao no nikaikaika ny faharatsian` ny lalana ao amin` ny faritra SOFIA ny mponina any an-toerana. Ny lalàm-pirenena faha-32 izay mampifandray an` Antsohihy amin` i Mandritsara,
ohatra, dia efa mampitaraina an` ireo mpampiasa lalana. Manahy mafy ankehitriny ny mponina mampiasana izany lalàm-pirenena izany fa misy fahasimbana ihany koa ny tetezan'i Sofia na Pont Sofia, izay mampitohy ny distrikan' Befandriana Avaratra sy Mandritsara iny. Omaly dia nidina ifotony nijery ny fahasimban'izao tetezana izao ny solontenam-panjakana, izay nahitana ny olom-boafidy sy olom-boatendry vitsivitsy. Efa andro maromaro no nahitana izao fahasimbana izao. Vokany mijaly ny mpampiasa làlana satria ahiana hitera-doza ity fahasimbana ity.